ခဏခဏ သွေးပေါင်ကျတတ်ရင် ဘာတွေကို သိထားဖို့လိုမလဲ??? - For her Myanmar
ခဏခဏ သွေးပေါင်ကျတတ်ရင် ဘာတွေကို သိထားဖို့လိုမလဲ???
by မယ်တင် (ဆေး-၁)
မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ 😛
ခေါင်းထဲ မူးခနဲ ၊ ရိပ်ခနဲဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွားပြကြည့်တဲ့အခါ သွေးပေါင်ကျနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ညီမလေးတို့ ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေ ပိုပြီးကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ ခဏခဏ သွေးပေါင်ကျတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေကို မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ လိုလာပါပြီ။
သွေးပေါင် ဘယ်လောက်ကို သွေးပေါင်ကျတယ်ခေါ်လဲ?
အပေါ်သွေး ပေါင်ချိန် ၉၀ အောက်နဲ့ အောက်သွေးပေါင်ချိန် ၆၀ အောက်ကိုတော့ သွေးပေါင်ကျတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဘယ်အကြောင်းတွေက ညီမလေးတို့ကို သွေးပေါင်ကျစေတာလဲ ?
အခန့်မသင့်လို့ ခိုက်မိလို့ သွေးအများကြီးထွက်တာကတော့ သိသာတဲ့ သွေးပေါင်ကျစေတဲ့အရာပါ။ ညီမလေးတို့ သတိထားသင့်တာလေးက တစ်လတစ်ခါ လာတဲ့ ရာသီသွေးဟာ အရမ်းများတာ (သို့) အတုံးအခဲတွေ ပါနေတာဆိုရင်တော့ မပေါ့ဆပါနဲ့။ ဒါဟာ တချို့သော ညီမလေးတွေအတွက် ရာသီလာနေချိန်၊ ရာသီလာပြီးချိန်တွေမှာ သွေးပေါင်ကျစေတဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျသိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
– ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာ များလို့
အများကြီး အန်ပြီးတဲ့အချိန် အများကြီး ဝမ်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ သွေးပေါင်ကျတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညီမလေးတို့ သတိမမူမိဘဲ သွေးပေါင်ကျစေတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်းရင်းဟာ နေပူထဲသွားပြီး ချွေးတွေ အများကြီး ထွက်ပြီးတဲ့အခါပါ။ တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အတော်ပူတာမို့ Shopping ထွက်ပြီးများ ပြန်လာမယ်ဆိုရင် အတော်ကို ချွေးထွက်များသွားမှာပါ။
မိန်းကလေးသဘာဝ ချဉ်ငန်စပ်တွေကို ကြိုက်တာတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒီချဉ်ငန်စပ်တွေမှာက သွေးအားကောင်းစေတဲ့ သွေးနီဥဖြစ်စေတဲ့ တစ်နည်းသွေးပေါင်တက်စေတဲ့ B12, Folate တွေ သိပ်မပါတတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ရာသီလာလိုက် ဆုံးရှုံးလိုက် အစားရွေးလိုက်နဲ့မို့ သွေးပေါင်ကျတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်.. ကြက်ဥ၊ ပဲ၊ အစိမ်းရင့် အသီးအရွက်တွေ ရွေးစားဖို့ လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဆိုရင်တော့ အားဆေးလေး မှီဝဲဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Related Article >>> မျက်နှာလေး ကြည်လင်တောက်ပပြီး လှနေစေဖို့လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်လေးများ
အခြား ရန်ဖန်ရံခါ သွေးပေါင်ကျစေတာကတော့
သောက်နေတဲ့ဆေးဝါးထဲမှာသွေးကျစေတာပါဝင်နေတာ(ဥပမာ .. ဆီးဆေး၊ သွေးကျဆေး)
သိပ်မဆိုးဝါးဘဲ နည်းနည်းပဲ ကျတဲ့ သွေးပေါင်ဆိုရင်
အသက်ရှူ မြန်လာတာစတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကျွန်မနှင့် သွေးတိုးကျဆေးအလွဲများ
ကော်ဖီ ၊ အရက်မဟုတ်တဲ့ အရည်များများ သောက်သင့်ပါတယ်
ချွေးထွက်များရင် ဓာတ်ဆား ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်တာ ၊ အိမ်သာမှာ အကြာကြီးထိုင်တာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အနေနဲ့ သွေးပေါင်ကျလို့ မူးလဲတာမျိုး ကြုံခဲ့ရင်တော့ လူက ပက်လက်အနေအထားနဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အတန်ငယ်မြှောက်ထားပြီး သွေးပေါင်အမြန်တက်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။
သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေးတို့အတွက် အက်ဒမင်ရဲ့ အထူးမေတ္တာလက်ဆောင်ပါလို့။
ခေါငျးထဲ မူးခနဲ ၊ ရိပျခနဲဖွဈလို့ ဆေးခနျးသှားပွကွညျ့တဲ့အခါ သှေးပေါငျကနြပေါတယျဆိုတဲ့ အနအေထားတဈခုကို ညီမလေးတို့ ကွုံဖူးကွမယျ ထငျပါတယျနျော။ သှေးပေါငျကတြယျဆိုတာ မိနျးကလေးတှေ ပိုပွီးကွုံတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ တဈခါတလေ ဖွဈတတျပမေဲ့ ခဏခဏ သှေးပေါငျကတြတျတယျဆိုရငျတော့ ဒါလေးတှကေို မဖွဈမနေ သိထားဖို့ လိုလာပါပွီ။
သှေးပေါငျ ဘယျလောကျကို သှေးပေါငျကတြယျချေါလဲ?
အပျေါသှေး ပေါငျခြိနျ ၉၀ အောကျနဲ့ အောကျသှေးပေါငျခြိနျ ၆၀ အောကျကိုတော့ သှေးပေါငျကတြယျလို့ ပွောရမှာပါ။
ဘယျအကွောငျးတှကေ ညီမလေးတို့ကို သှေးပေါငျကစြတောလဲ ?
အခနျ့မသငျ့လို့ ခိုကျမိလို့ သှေးအမြားကွီးထှကျတာကတော့ သိသာတဲ့ သှေးပေါငျကစြတေဲ့အရာပါ။ ညီမလေးတို့ သတိထားသငျ့တာလေးက တဈလတဈခါ လာတဲ့ ရာသီသှေးဟာ အရမျးမြားတာ (သို့) အတုံးအခဲတှေ ပါနတောဆိုရငျတော့ မပေါ့ဆပါနဲ့။ ဒါကွောငျ့ တခြို့သော ညီမလေးတှမှော ရာသီလာနခြေိနျ၊ ရာသီလာပွီးခြိနျမြားမှာ သှေးပေါငျကတြတျတာပါ။
– ရဓောတျဆုံးရှုံးတာ မြားလို့
အမြားကွီး အနျပွီးတဲ့အခြိနျ အမြားကွီး ဝမျးသှားပွီးတဲ့အခြိနျမှာ သှေးပေါငျကတြတျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ညီမလေးတို့ သတိမမူမိဘဲ သှေးပေါငျကစြတေဲ့ နောကျထပျ အကွောငျးရငျးဟာ နပေူထဲသှားပွီး ခြှေးတှေ အမြားကွီး ထှကျပွီးတဲ့အခါပါ။ တို့ရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဟာ အတျောပူတာမို့ Shopping ထှကျပွီးမြား ပွနျလာမယျဆိုရငျ အတျောကို ခြှေးထှကျမြားသှားမှာပါ။
မိနျးကလေးသဘာဝ ခဉျြငနျစပျတှကေို ကွိုကျတာတော့ ပုံမှနျပါပဲ။ ဒီခဉျြငနျစပျတှမှောက သှေးအားကောငျးစတေဲ့ သှေးနီဥဖွဈစတေဲ့ တဈနညျးသှေးပေါငျတကျစတေဲ့ B12, Folate တှေ သိပျမပါတတျပါဘူး။ ဒီတော့ ရာသီလာလိုကျ ဆုံးရှုံးလိုကျ အစားရှေးလိုကျနဲ့မို့ သှေးပေါငျကတြာလညျးဖွဈနိုငျပါသေးတယျ.. ကွကျဥ၊ ပဲ၊ အစိမျးရငျ့ အသီးအရှကျတှေ ရှေးစားဖို့ လုံးဝမကွိုကျပါဘူးဆိုရငျတော့ အားဆေးလေး မှီဝဲဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
Related Article >>> မကျြနှာလေး ကွညျလငျတောကျပပွီး လှနစေဖေို့ လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျလေးမြား
အခွား ရနျဖနျရံခါ သှေးပေါငျကစြတောကတော့
သောကျနတေဲ့ဆေးဝါးထဲမှာသှေးကစြတောပါဝငျနတော(ဥပမာ .. ဆီးဆေး၊ သှေးကဆြေး)
သိပျမဆိုးဝါးဘဲ နညျးနညျးပဲ ကတြဲ့ သှေးပေါငျဆိုရငျ
အသကျရှူ မွနျလာတာစတဲ့ လက်ခဏာတှေ ပွတတျပါတယျ။
Related Article >>> ကြှနျမနှငျ့ သှေးတိုးကဆြေးအလှဲမြား
ကျောဖီ ၊ အရကျမဟုတျတဲ့ အရညျမြားမြား သောကျသငျ့ပါတယျ။
ခြှေးထှကျမြားရငျ ဓာတျဆား ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ။
အကွာကွီး မတျတပျရပျတာ ၊ အိမျသာမှာ အကွာကွီးထိုငျတာ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
အရေးပျေါအနနေဲ့ သှေးပေါငျကလြို့ မူးလဲတာမြိုး ကွုံခဲ့ရငျတော့ လူက ပကျလကျအနအေထားနဲ့ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို အတနျငယျမွှောကျထားပွီး သှေးပေါငျအမွနျတကျအောငျလုပျသငျ့ပါတယျ။
သှေးပေါငျကတြယျဆိုတဲ့ ညီမလေးတို့အတှကျ အကျဒမငျရဲ့ အထူးမတ်ေတာလကျဆောငျပါလို့။
Tags: blood, Blood Pressure, care, girls, Health, low, tips, To my little sister
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း - ၉)
ဒီပိတ်ရက်မှာ ပျော်စရာ ဒီပွဲလေးတွေ ရှိပါတယ်..
မယ်တင် (ဆေး-၁) January 29, 2019